कपाल हेरेरैं जानौं, कुन महिला कति सेक्सी ? जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
कपाल हेरेरैं जानौं, कुन महिला कति सेक्सी ?
कपालको सौन्दर्यता केवल आर्कषकको लागि मात्रै हुँदैन, त्यसले तपाईको व्यक्तित्व पनि झल्काउँछ । कपाल व्यक्तित्वको मानक पनि हो । व्यक्तिको विचार, स्वभाव र जीवनशैलीजस्ता कुराहरु उसको कपाल देखेर बुझ्न सकिन्छ । विभिन्न परिक्षणमा व्यक्तित्वको जाँच गर्दा उसको कपालबारे पनि थुप्रै अध्ययन भएका छन् । आउनुस्, जानी राखौंः महिलाका कपाल हेरेर कुन महिला कति सेक्सी भनेर कसरी बुझ्ने ?
लामो कपाल: लामो कपाल भएकी महिला यथार्थ परिस्थितिमा जिउने स्वभावका हुन्छन् । कल्पनाको संसार यिनीहरु त्यतिखेर मात्र देख्छन्, जुनवेला उनीहरुको जीवनमा कुनै ठोस परिणाम नजिकै आउदैछ । गफभन्दा पनि काममा यिनीहरु बढी तल्लिन हुन्छन् । यिनीहरु कम बोल्छन्, काममा बढी प्राथमिकता दिन्छन् । यही नै लामो कपाल भएकी महिलाको मुलमन्त्र हुने गर्छ । परिस्थिति अनुसार विचार गरेर मात्र बोल्ने स्वभाव हुनेगर्छ यिनीहरुको । पैसाको महत्वबारे यिनीहरुले राम्रै जानकारी हुन्छ । त्यसैले यिनीहरु बढी किफायती वस्तुको प्रयोग गर्ने गर्छन् । र, साथसाथै लामो कपाल भएकी महिला बढी व्यवहारिक पनि हुने गर्छन् ।
कर्ली कपाल: कर्ली कपाल भएकी महिला कलाकार हुन्छन् । साहित्य र संगीतमा यिनीहरुको बढी लगाव हुने गर्छ । यस्ता खाले महिला कल्पनाको संसारमा डुब्ने गर्छन् । यिनीहरुलाई मान–सम्मान र मस्तीमा खास शौख हुनेगर्छ । कर्ली कपाल भएकी महिला अरुबारे कमैमात्र दुरदर्शी व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । भाग्यभरोशाको मामिलामा यिनीहरु दुई नम्बर अगाडि नै हुन्छन् । यस्ता खाले महिला ‘जिऊ र जिउन देऊ’ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् ।
पातलो कपाल: पातलो वा कम कपाल भएकी महिला आफ्नो मेहनत र इमान्दारीको कमाइमा विश्वास राख्छन् । यस्ती महिला अन्यको तुलनामा कमैमात्र रोमान्टिक हुने गर्छन् । यिनीहरु मुखामुख लाग्दैनन् । यस्ताखाले महिलाको मुल मन्त्र हो– ‘जो मिल्यो, उही उसको भाग्यमा रहेछ ।’ यिनीहरु प्रेममा प्रायजसो धोका खाने गर्छन् । स्वभावमा पनि यिनीहरु ‘शर्मिली’ हुन्छन् । यिनीहरुको जीवन एकदम शान्त तवरमा वित्ने गर्छ ।
छोटो कपालः छोटो कपाल भएकी महिला एकदमै मेहनती हुन्छन् । कडा अनुशासनमा रहने यिनीहरुको वानी हुनेगर्छ । यिनीहरुको मनभित्र ‘प्रेम र घृणा’ दुबै एकसाथ कायम हुन्छ । यिनीहरुको व्यक्तित्वमा कैयौंपटक दोहोरोपन देखापर्छ । छोटो कपाल भएकी महिला कुनै वेला पैसा पनि खर्च गर्छन्, कुनै वेला झिक्दै–झिक्दैनन् । यस्ती खाले महिला ‘धोकेवाज’ हुँदैनन् । कैयौंपटक यिनीहरुले बोल्ने ‘सपाट–शैली’ कारण अरुको नजरमा यिनीहरु घमण्डीजस्ता देखिन्छन् । यिनीहरु थोरै स्वार्थी र महत्वाकांक्षी पनि हुने गर्छन् । यस्ती महिला आफ्नो हितको लागि ज्यादै व्याकुल बन्ने गर्छन् । महफिल यिनीहरुलाई खुबै मनपर्छ । यस्ती महिलाका मित्रहरु एकदमै ‘सेलेक्टिव’ हुने गर्छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)